Hidhamtoonni kumaatamatti lakkaa'aman kan biraa ammas mana hidhaa Saawudiitti argamu - BBC News Afaan Oromoo
Hidhamtoonni kumaatamatti lakkaa'aman kan biraa ammas mana hidhaa Saawudiitti argamu
Torban darbee keessa Ministirri Mummichaa Dr Abiy Ahimad dowannaa biyya Saawudi arabiyaatti taasisaniin, erga mootii Saawudii waliin mari'atanii booda hidhamtoonni lammiilee itoophiyaa akka gadhiifamaniif waliigalteerra gahamee ture.
Haaluma kanaanis heedduu gara biyyaa kan deebii'an yoo ta'u kanneen afanitti ammoo abdii umuusaa BBC'tti himaniiru.
Hidhamaan maqaansaa akka hineeramne gaafachuun BBC'tti dubbatte tokkoos, waggoota lamaan dura osoo Yeman irraa gara Saawudii deemaa jirauu qabamee mana hidhaa galusaa dubbatta. Innis hidhamtoota lammiilee itoophiyaa kumaatama mana hidhaa Jiddaa Jiizaaneetti argaman keessaa tokko.
''Oduun ministirri mummichaa hidhamtoota gadhi lakkisiisuuf taasisee hojiirra kan oluu yoo ta'ee, jireenya kiyya keessa boqonnaa haarawaa saaqa.''
Ministirri mummichaa Itoophiyaa mootii Saawudii Mohaamad Saalmaan waliin marii taasisaniiru. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa tokko, dhimma hidhamtoota gadhiisuuti tokko.
Haaluma waliigaltee motummootaa kanaanis hidhamtoonni kuma tokko ta'an gadhiifamuun gara biyyaa deebi'aniiru.
Hidhamaan wayita ammaa mana hidhaa Jiizaaneetti argaman keessa tokko akka jedheetti, '' lakkoofsa hidhamtootaa sirritti beeku baadhulleen tilmaamaan gara kuma shanii ni ta'u,' jedheera.
Mana hiidhaa keessatti bilbila harkaa fayyadamuun waan danda'amuuf hidhamaa kanas haaluma kanaan bilbillee arganne.
''Hanga ammaatti omtu nurratti hinmurtoofne. Namoonni mana hiidha kana keessa waggoota lamaa hanga waggoota sadii turan jiru'' jedha.
Garasi kan qajeelan jireenya fooyya'aa barbaachaa turusaa kan dubbatu hidhamaan kun, garuu hiidhaaf saaxilamne jirras jedheera.
''kaayyoon hidhaa barsiisuuf yoo ta'eelleen nuti garuu asitti rakkachaa malee wanti barannee tokkolleen hinjiru. Falatu nu barbaachisa,'' jechuun abdi isaa BBC'tti himeera.
Jidaatti Ambaasadarri Waajira Qontsilaa Itoophiyaa, Obbo Wubishat Damise mana hiidhaa Saawudiitti hidhamtoonni lamiilee Itoophiyaa murtee cimaa jiraachusaanii dubbataniiru.
Saawudiitti Ambaasaadarri itoophiyaa Amiin Abdul Qadiir gama isaanitiin, haaluma waliigaltee motummootaa lameenitiin hidhamtoonni hiikamuun gara biyyaa galaa kan jiran yoo ta'u, kanneen hafanis haala itti gadhiifama irratti hojatamaa jira jedhaniiru.
Waliigalteen mootummoota lamaan jidduuti taasifamees hiikamuu hidhamtootaatiif madda ta'eera jedhu. Hanga ammaattis marsaa lamaan hidhamtoonni gara biyyaatti deeebifamaniiru.
Walitti dhufeenyi biyyoota lamaanis gara sadarkaa fooyya'aarra qaqabuusaa kan himan ambaasaadarichi, hojiin hidhamtoota hiksiisuu kunis kan obsaafi yeroo gaafatu ta'u himu.
Hidhamtoonni mana hiidhaa Jiizaanitti argaman garuu ''yeroo baayyee gara Imbaasii Itoophiyaatti gargaarsaaf bilbilu illeen deebiin nuuf kennamee hinbeeku,'' jedhu.
Ambaasaadarichi gama isaanitiin, ''Qontsulaan Itoophiyaa Saawudiitti argamu lamiilee Itoophiyaa dahuu seeraa jalatti argamaniif hordoffii ni taasisa,'' jedhaniiru.
Kana malees hidhamtoonni seera biyyatti darbuun kan hidhaman yoo ta'anilleen dhiifamni akka taasifamuuf sadarkaa biyyaatti yaaliin taasisamaa jiraa jedhaniiru Ambaasaadarichi. ''Deebii gahaas kennaa jirra,'' jedhaniiru.
Hidhamtoonni tokko tokkoos kan mana murtiin murteen itti kenname yoo ta'eeyyuu, mootummaan haaluma jalqabeen hiksiisuufobsaan akka itti fufu dubbatu.
''Sirnaafi seera biyyatti haalaan qorachuufi hubachuun akkasumas adeemsawwan murtee qulqulleefachuun ofi eegannoon hojachuun barbaachisaadha,'' jedhaniiru.
Keessattu lakkoofsi namoota gara Saawudii imalanii dabaluunsaa yaachisaa ta'eera kan jedhan ambaasaadarichi, hidhamtoota hiksiisuun alattis hojii hubannoo cimsuu hojachaa jiraachusaanii himaniiru.
Wayita dowwannaa isaanitti ministirri mummichaa waa'ee hiikamu Sheek Huseen Ali Alaamuddiis dubbatamuunsaa midiyaalee mootummaatiin gabaafamee ture.
''Dhimmichis itti fufiinsaan akka ilaalamu gama Saawudiitii mirkanneefanneera,'' jedhaniiru.
"Mucaankoo amma dammaqa jedhee osoon eeguu kunoo waggoota 12 guute''
Abrahaam Balaay (PhD) hojii gaggeessaa Bulchiinsa yeroo Naannoo Tigraay ta'uun muudaman